Xukuumadda Soomaaliya oo mushaaradkii ka joojisay Macaliniintii ay diiwaan-galisay - Awdinle Online
Xukuumadda Soomaaliya oo mushaaradkii ka joojisay Macaliniintii ay diiwaan-galisay
Qaar ka mid ah Macallimiinta wax ka bara Iskuullada ay maamusho dowladda Soomaaliya ayaa ka cabanaya mushaar la’aan dhowr bil ah oo haysata.
Macallimiintaan ayaa sheegay in aysan qaadan wax mushaar ah bishii March illaa hadda, islamarkaana aysan fileyn bilaha soo socda.
Qaar ka mid ah macallimiinta ayaa Awdinle Online u sheegaya in sababta mushaharka loogu diiday ay tahay kadib markii wasaaradda waxbarashada ay dabayaaqadii bishii March ku dhowaaqday in lasoo sanad dugsiyeedkii xilli ay ka harsan tahay dhowr, sababo la xiriira cudurka Coronavirus.
“Waxaa na loo sheegay in maadaama iskuulladii la xiray aynan lahayn wax mushahar ah,” ayuu yiri Macallin la hadlay Awdinle Online, oo intaas ku daray inay marayaan ciqaabta shaqo aysan ayaga joojin.
Tobaneeyo ka mid ah macallimiinta oo aan la hadalnay ayaa sidoo kale sheegay in dadaal badan oo ay sameeyeen ay ku guul darreysteen helida Xuquuqdooda waxayna baaq u direen madaxda dowladda Soomaaliya.
“Waa ramadaan, Ciidii ayaa soo dhaw wax mushaar ahna ma helin 3 bilood, waxaan codsaneynaa in xuquuqdeyna nala siiyo,” ayuu yiri mid ka mid ah macallimiinta oo nala hadlay.
Barayaashaan oo gaaraya dhowr kun oo ku nool Muqdisho iyo goballada dalka ayaa wajahaya xaalado adag mana ku dhiiran karaan iney warbaahinta si shaacsan uga hadlaan, sababo la xariirta rajo ay ka qabaan shaqadooda.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya wali kama aysan hadlin qeyla dhaanta macallimiinta, sidoo kalena kama jawaabin xiriir ay la samaynay
Previous articleMareykanka Oo Dedejinaya Qorshe Lagu Ciqaabayo Shiinaha
Next articleXasan Shire: Dowlad Wariyaha u Xirto Ama u Jirdisho Maxaad Warkaas u Sheegtay Waa Dowlad Xun